Duulimaadyada caalamiga ah ee Soomaaliya oo dib uga…
Duulimaadyada caalamiga ah ee tagaya kana baxaya Caasimada Soomaaliy ee Muqdisho iyo gobolada kale ee dalka ayaa dib u bilaaban doona bari oo Isniin ah qiyaastii shan bilood ka dib markii la joojiyay sababo la xariira xanuunka COVID19.
Waaxda socdaalka ayaa ku dhawaaqday isniintii dib u bilaabashada duulimaadyada caalamiga ah iyada oo ay qasab tahay in rakaabku la kulmaan tillaabooyin caafimaad oo adag si loo xakameeyo faafitaanka COVID19.
“Rakaabku waa in ay haystaan ​​shahaado caafimaad oo cadeyneysa in ay ka madaxbanaan yihiin coronavirus. Cadeeynta (Shahaadada diidmada Coronavirus) waa in la helaa wax aan ka badneyn 72 saacadood kahor safarka,” ayaa lagu yiri banayaanka.
Soomaaliya ayaa hakisay duullimaadyadii gudaha iyo kuwii caalamiga ahaa bartamihii bishii Maarso kadib markii kiisas cusub oo COVID19 ah laga helay dalka. Duulimaadyadii maxalliga ahaa ayaa dib u bilaabay bishii hore.
Soomaaliya ayaa ilaa iyo bishii Luulyo 28 keedii diiwaan gelisay 3,212 kiis oo COVID19 ah waxaana ku dhinteen 93 qof.
Golaha Wasiira waayay kalsoonida golaha shacabka ayaa ansixiyay qaadista xayiraadaha safarka Khamiista waxayna ku amreen waaxda socdaalka in ay qaadaan talaabooyin dib loogu bilaabayo safarka caalamiga ah.
In kasta oo xayiraadda laga qaaday, musaafiriinta ka socota Soomaaliya ma gali doonaan Kenya ka dib markii Nairobi ay ku dartay Soomaaliya liiska wadamada aan soo dhaweyn laheyn ilaa ogeysiis dheeraad ah oo ku saabsan faafitaanka COVID19.